Magaaladda Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa Goordhow waxaa gaaray Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sh Axmed oo Saacado lagu hakiyey garoon diyaaradaha ee muqdisho, ka hor inta aysan ka duulin xamar.
Safarka Madaxweyneyaashii hore ee Baladweyne ay ku tageen ayaa waxaa ku wehlinayay Madax ka tirsan Madasha Xisbiyada Mucaaradka ah ee dalka, waxaana halkaas kusoo dhaweeyay Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeele, Maamulka Gobalka Hiiraan iyo xubno kale oo halkaas ku sugan.
Sidoo kale Madaxweyneyaashii hore iyo Madaxda Madasha Xisbiyada Mucaaradka ah ayaa Baladweyne u wadey gargaar loogu talagalay dadkii ku barakacay fatahaadii ka dhacday Baladweyne.
Madasha Xisbiyada Mucaaradka ah ee dalka ayaa dhawaan ku dhawaaqday in $200,000 kun Doolar ay ugu deeqeen gargaar ah laguna caawinayo dadka Soomaaliyeed ee Fatahaaduhu saameeyeen.
Dhinaca kale Diyaaradii ay la socdeen Madaxweyneyaashii hore Soomaaliya ayaa inta aysan ka dagin Garoonka Baladweyne ayaa waxaa laga demiyay Isgaarsiintii xiriirka Garoonka iyo Diraayadda, hayeeshee mudo 23 daqiiqo ka dib waxaa suuragal noqotey in isgaarsiintii la helo, markii dambe diyaaradda ay ka degtay Magaalada Baladweyne.
Cali Guudlaawe ayaa gacan weyn ka geystey sidii diyaaradda ay u degi laheyd iyo sidii loo suuragelin lahaa in gargaarka ay wadeen wafdi aan loo siyaasadeyn lahey.